Dhageyso:-Maxaa ka dhalan kara hadii uu baaqdo Shirka Dhuusamareeb? | SMC
Home WARARKA MAANTA Dhageyso:-Maxaa ka dhalan kara hadii uu baaqdo Shirka Dhuusamareeb?
Dhageyso:-Maxaa ka dhalan kara hadii uu baaqdo Shirka Dhuusamareeb?
Muddo Saddex Cisho ah kaliya ayaa ka harsan qabsmoomida Shirka Madaxda Dowladda Federaalka & Dowlad goboleedyada ay ku yeelanayaan Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug, waxaana Shirkaasi uu u muuqdaa mid dib u dhac ku imaan kara.
Dhowr waxyaabood ayaa loo sababeynayaa in uusan dhicin waqtiga loogu talo galay shirka Dhuusamareeb oo ah 15-ka Bishaan oo ay kamid tahay in inay meesha ka baxday Xukuumaddii Ra’iisul Wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali kheyre iyo arrimo kale.
Hadaba waxaa la is weeydiinayaa waxaa ka dhalan kara hadii uu baaqdo Wajiga Saddexaad ee Shirka Magaalada Dhuusamareeb waxaa Warbixin ka diyaariyey
Previous articleCiidanka Dowladda oo howlgallo culus ka bilaabay Gobolka Gedo
Next articleDhageyso Warbixin Ku Saabsan Xuska Maalinta Dhalinyarada Aduunka ee 12 August